Ma “Guantanamo Bay” baa Boosaaso ka furan?
Ilaah baa mahadleh. Nabadgelyo iyo naxariis Nabi Muxamed korkiis ha ahaato.
Marti-soorka iyo magan-bixinta waa arrin fidhro ah oo xittaa mushrikiintii Carbeed ay aad u tixgelin jireen. Faalladii ahayd qiimaha dhulka waxaan soo xussay in markii hijrada iyo jihaadku iskugu yimaadaan hal Aayad inta badan la hor mariyo hijrada maxaa yeelay dagaalku waa wax dabiici ah laakiin qofka oo dhulkiisa ka hijrooda maahayn hadda ka hor wax caadi ah. Dadka inta badan ma aqbali jirin inay u qaxaan dhul kale oo waxay door- bidi-jireen inay dhulkooda ku dhintaan intay dhul kale aadi- lahaayeen. Isla sheekadaa waxaan ku soo aragnay in markii dhibta la waynaynayo lasoo qaato ereyga ah qariib sidii Xaddiiskii ahaa Islaamku qariib buu ku biloowmay wuxuuna ku noqon qariib. Waxaan kaloo carrabka kusoo dhuftay in qofka qariibka ah (marti) ay marti-gelintiisu waajib tahay ilaa seddex bari. Qofka gurigiisa jooga ma laha xuquuqdaas oo cid uu khasab ugu leeyahay marti-gelin lama arko.
Inta aanan mowduuca sii dhex-gelin waxaan idin tusinayaa caddaalad darrada na haysata oo mar-marka qaarkood waxaa igu adkaata inaan kala garto cidda uu maqaalkeygu ku socdo. Ma cidda aan u doodayo mise kuwa uu ku socdo? Bal cinwaan aan horay u qoray oo aan soo gaabinayo ila arka:
Puntland: tahriibkiina badday ku tuureen, tabliiqiina xabsi.
Haddii qoladii aan u jeeday ama taageerayaashoodu ka dabaakhaan dhib ma lahaateen laakiin waxaad arkaysaa dadka kale oo sheegayaa inayna qoladaas ahayn oo haddana dood qaba. Maxay ka biyo-diideen? Waxay dhaheen Puntland baad cayday! Waxaan is-lahaa kuwa dibadaha joogana waxay la socdaan adduunka kuwa Soomaaliya joogana waxaa kaaga filan BBC-da. Marka BBC-du leedahay Washington kuma faraxsana arrintaas maxay ka waddaa? Odayga baadiyaha geela ku raacaya waa ogyahay in laga wado dowladda Maraykanka ee aysan shakhsi shuqul ku lahayn. Moscow iyo London oo isku soo dhowaanaya? Isla maqaalkaas waxaan magacaabay dadkii aan u danlahaa.
Dadka Soomaaliyeed ee jooga qurbaha ka badan malyan. Intooda badana waxay joogaan wadamada reer Galbeedka. Sidaan la socono waxaa adduunku samaystay dagaalkii labaad ka dib sharci lagu eego dadka dhibabka ka soo muta meelihii ay ka yimaadeen waa “Geneva convention. Waa qodobka aan ku biyo-cabno haddaan Soomaali nahay. Waxaan u haystay haddii adduunku saas noo soo dhaweeyey inaan anaguna dadka dhibban aan saas ula tacaalno. Waxaa ka sii daran qab-qable kasta ilmihiisu waxay u jiraan dibadda. Heshiiskaas Geneva ka hor 1300 sano wuxuu Islaamku noo sheegaa in haddii qof mushrik ah na magan-galo aan magan-gelino si uu umaqlo Hadalka Ilaahay kaddibna aan gaarsiino ammaan. Micnaha ha qaato Diinta ama yuusan qaadan.
Haddaba akhristoow nin Shiikh Cali magaciisa ku soo gaabiyey oo u ka yimid Puntland ayaa sheegay inuu ku xirnaa guri ku yaal magaalada Boosaaso isaga iyo 4 qof oo Carab ah. Waxaan aaminsanay inuu eersaday Shiikha magaciisa ka horreeya. Wuxuu sheegay gurigu meeshuu magaalada uga yaal, inuu dabakh yahay. Halkaas wuxuu ku sheegay inay joogeen dad caddaan ah oo lagu sheegay sir-doonka Maraykanka. Guriga waxaa leh qolyihii sheegtay (PIS) “Puntland intelligence services” oo ay ka wadaan hay’adda sirdoonka Puntland. Anigu horay waxaan ugu sheegay “Puntland intimidation services” oo ah hay’adda cabsigelinta reer Puntland. “Da’dii aan ka qaadiyo miyaan deelkii ka haboowshay”? Ninka Burco jooga ee PuntlandPost warka siiyey waa reer Punltand sheegtay inaan lasheegin magaaladii laga soo qabtay. Maraykanku waa sir-doon oo cadowgooda ayey la xaalayaan laakiin nimankaas yaa cadow u ah? Ma Shiikh Cali oo ina adeerkood ah? Ma dad ganacsato ah oo Carab ah? Ma tabliiqa?
Dadka geyiga degen iyagaa is-yeelaye maxaa martida lagu galay? Meeye odayaashii? Horay waxaan usoo sheegnay in mar uu Abuu Bakar (RC) iskaga baxay Makkah markii uu u adkaysanwaayey dhibka ay ku hayaan sufahadii Quraysh. Isagoo meel dhexe sii maraya ayaa wax ka horyimid nin Quraysh xulufo la ahaa oo aan muslim ahayn laakiin wuxuu yiri Abuu Bakaroow adoo kale tolkiis kama dhex-baxo. Waxaad soortaa martida, waxaad caawisaa masaakiinta, IWM. Wuxuu yiri waxaad ku jirtaa jiwaarkayga oo cidna wax kuma yeeli karto. Sidoo kale waatii markii Nabigu (SCW) uu Daa’if kasoo noqday ay ku adkaatay inuu Makkah ku soo noqdo laakiin wuxuu u cid-dirsaday Mudhcim. Mudhcimna wiilashiisii buu diyaariyey oo yiri Muxamed (SCW) hasoo galo. Wuxuu la hadlay Quraysh oo uu yiri yaan Muxamed (SCW) loo dhawaan.
Ninkaas mushrika ahaa ayaa ka fikir fiican kuw la baxay “PIS” maxaa yeelay hay’adani waxay bannaanka u saartay Culumadii, aqoonyahaynkii iyo ganacsatadii halka mushrigii gartay in dantu ku jirto Abuu Bakar waloow uusan mabda’iisa jeclayn. Waxay booskooda soo gashadeen sir-doon Maraykan iyo Xabashi! Waxaa baas lahaaday dad magacyo muslim wata oo ka caqli xun mushrik.
Yaa dadkaan martida ah ee Carbeed u maqan? Tabliiquse ma Carab baa? Haddii hal asbuuc ay Imaaraadka Carabtu ka istaajiyaan xawilaadda iyo doomaha aada “Puntand” gaajay u bakhtiyayaan. Imisa Soomaaliyeed oo shariif, shiikh, iyo shacab leh jooga Carabta? Kumanaan. Aaway waxgaradkii Puntland? Intoodii badnayd waxay joogaan Carabta iyagoo C/hi ka soo cararay. Doomaha Bari ka baxa ma Maraykan bay ku xirtaan? Waligey doqonimada intaas le’eg ma arag. Qof wuu is dhihi karaa Dubai iyo Carabuhu lacagtayadii bay qabaan oo waxay naga faa’iidaan malaayiin Doolar sanadkii. Waa hadal gar ah laakiin lacagtaada way ka maarmi karaan haddii la is-qabto laakiin anagu hadda waan u baahanahay oo waa meesha uu Ilaah nagu badbaadshay.
Sida aan la socono maamulka Puntland wuxuu khilaafay fidhradii, heshiisyadii adduunka kale dhigtay iyo waliba Diintii xaqa ahayd markii ay si cad dadkii martida ahayd ugu gafeen oo u dhiibeen.
Nin walaal ah, Warsame Geele Warfaa wuxuu yiri war haddaysan marti-gelin karin oo ay naftooda u baqeen may iska dhoofshaan oo diyaarad saaraan. Waa sida ugu hoosaysa ee marti loola dhaqmo.
Reer Galbeedku waxay aad ucayrsadaan muslimiinta joogta meelaha kale. Waagii hore kuwa dhulkooda jooga xoogaa waa daysan jireen. Sabab? Waxay yaqaanaan in haddii ay ku talax-tagaan ay dhib u kordhinayso sida dadkooda oo fahma waxashnimada dowladda iyo mindhaa inay ogyihiin in ciqaabta noocaas ahi soo deg-degto.
Wararku waxay sheegeen in xerada “X ray” ee Boosaaso ku taal ay kali ku tahay Soomaaliya. Waxaase la filayaa in xarumo kale laga furo Hargeysa, waxaa la sheegaa in maalmo dhowayd ay Xamar joogeen sir-doon Maraykan iyo Yuhuud ah. Marar badan bay taageerayaasha C/hi na waydiisteen inaan sheegno wanaagiisa marka anigu wanaag uma hayee taas haku darsadeen. Soomaalida kale hadday dhahaan gaalo-raac baad tihiin maxaan ku diidaynaa?
Dhibka la gaarsiiyo martidaas wuu ka waynyahay kan la gaarsiiyo dadka u dhashay mandiqadaas maxaa yeelay odayaashooda ayaa awalba C/hi doortay sidoo kale waxaa dhici karta in looga soo daayo qaraabo kale ama lacag laakiin dadkaas muslimiinta ah ee martida ah ee Salaadii loo gaabiyey oo soonkii loo fududeey inkaartoodu ma ahan mid daahaysa. Waa arrintaas midda keentay in dadkoo dhami sanka ka qabsadaan kornaylka. Bal fiiriya maqaalada Afsoomaali iyo Ingiriis leh ee laga qorayo. Adduunku taariikhda ayuu akhriyaa. Ma aragteen Maraykanka uu u shaqaynayo oo ammaanaya C/hi? Ma dhici karto maxaa yeelay Maraykanku wuxuu ogyahay haddii uu isku dayo inuu C/hi ammaano in dadkoo dhami qaylinayaan oo la oranayo ma Saddaamkii/Qadaafigii/Xusnigii/Fahadkii Soomaaliya ayaad ammaanaysaa? Waa arrintaas waxa hadda kooxihii ka soo horjeeday u middoobayaan. Waxaa iska cad in haddii doorashaba ay noqoto uusan cod helayn.
Ka warran dadka kale? Runtii waxaa dhacda in dhibka bulsho isku hayso uu dabo-dheeraado laakiin waxaan aaminsanahay in waxa ka dhacaya Boosaaso ay saamayn ku yeelan doonto xittaa shacabka caadiga ah maxaa yeelay waa xad-gudub ku cusub Binu-Aadamnimada. Marka dhibkaasi waa soo if-bixin. Marka innagaa Boosaaso C/hi ku soo dhawaynay sidoo kale innagaa dhexdeeniina martidii sidii xoolihii la iska xirayaa oo la iska iibsanayaa marka aan dhowrno abaalkeenii. Boosaaso waa nabad ha iga harto!
Qabiilka la yiraahdo Rabiica ee Carbeed waxay usu laayeen Bakriyiin iyo Taqliibiyiin. Maxay isku dagaaleen? Boqorkii Taqliibiga ahaa ee ay doorteen ayaa dilay hal geel ah oo ay lahayd haweenay habaryar u ahayd mid ka mid ah Bakriyiinta oo la oranjiray Jasaas Binu Murrah. Wuu ka gubtay in habaryartii uu boqorkaasi tixgelin waayo dabadeedna boqorkii buu dilay. Waxaa halkaas ka dhacay dagaal aan horay loo arag oo mudo dhan socday.